သဘာဝ Menthol Crystals ၏ CAS အမှတ် ၂၂၁၆-၅၁-၅
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > အနံ့ဓာတုပစ္စည်းများ > သဘာဝအနံ့ဓာတုပစ္စည်းများ > သဘာဝ Menthol Crystals
သဘာဝ Menthol Crystals
Natural Menthol Crystals တွင်လုပ်ဆောင်ချက်များစွာနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များရှိသည်။ Natural Menthol Crystals များကိုသွားတိုက်ဆေးနှင့်အိမ်သာသုံးရန်အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ Natural Menthol Crystals များကိုရေမွှေးထဲသို့ထည့်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် Natural Menthol Crystals သည်ယားယံခြင်းကိုတားဆီးပေးပြီးအရေပြားကိုအသုံးပြုပြီးနောက်အလွန်အေးမြသည်။ သဘာဝ Menthol Crystals များကိုခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ နှာခေါင်း၊ pharynx၊ လည်ချောင်းရောင်ခြင်းစသည့်တို့ကိုလည်းကုသနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် Natural Menthol Crystals ကိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ ဆေးပညာအတွက်။
ပုံစံ:သဘာဝ Menthol Crystals
သဘာဝ Menthol Crystals အခြေခံအချက်အလက်များ
ထုတ်ကုန်အမည်: သဘာဝ Menthol Crystals
synonyms: (1R- (1-alpha, 2-beta, 5-alpha)) - 5-Methyl-2- (1-methylethyl) cyclohexanol;(1r, 3r, 4s) - (-) - mentho;(1R, 3R, 4S) - (-) - MENTHOL;(R) - (-) - Menthol;Emtricitabine ညစ်ညမ်းမှု 31;သဘာဝ Menthol Crystal;L-Meng အရက်သဘာဝ menthol Menthol (L);DL-Menthol menthol ပုံဆောင်ခဲ
ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား တားစီး;Organics;တေးဂီတ;API;ဇီဝဓါတုဗေဒ;Terpenes;Terpenes (အခြား);အက်ဆစ်၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည်;Monocyclic Monoterpenes;optical resolution ကို;ဒြပ်အော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒ
Mol ဖိုင်: 2216-51-5.mol
သဘာဝ Menthol Crystals Chemical Properties
အရည်ပျော်မှတ် 41-44 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (lit)
alpha -51 Âº (589nm, c = 10, EtOH)
ရေဆူမှတ် 212 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (lit)
သိပ်သည်းဆ ၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် ၀.၈၉ ဂ / mL (lit) ။
အငွေ့ဖိအား ၀.၈ မီလီမီတာ Hg (20 ° C)
FEMA 2665 | စိတ်ရောဂါကုသမှု
သိုလှောင်မှုအပူချိန်။ ° 20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
ပျော်ဝင်နိုင်ခြင်း 490mg / l
ပုံစံ Crystals သို့မဟုတ် Crystalline အပ်များ
pka 15,30 ± 0.60 (ခန့်မှန်း)
optical လှုပ်ရှားမှု 95% အီသနော [Â±] 22 / D 49Â°, c = 10
CAS ဒေတာဘေ့စကိုးကားစရာ 2216-51-5 (CAS ဒေတာဘေ့စ်ရည်ညွှန်းချက်)
NIST ဓာတုဗေဒကိုးကားစရာ Cyclohexanol, 5-methyl-2- (1-methylethyl) - [1R- (1 « alpha »»,2« beta »,5« alpha »)] - (2216-51-5)
EPA ပစ္စည်းမှတ်ပုံတင်စနစ် Levomenthol (2216-51-5)
သဘာဝ Menthol Crystals Safety Information
Hazard ကုဒ်များ ရှီ
အန္တရာယ်ဖော်ပြချက်များ 37 / 38-41-36 / 37/38
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးထုတ်ပြန်ချက်များ 26-39-37 / 39-36
WGK ဂျာမနီ 2
HS ကုဒ် 29061100
အန္တရာယ်ရှိသောအရာများဒေတာ 2216-51-5 (အန္တရာယ်ရှိသောပစ္စည်းများ)
အဆိပ်အတောက် ယုန်အတွက် LD50 ပါးစပ်: 3300 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ် LD50 အရေပြားယုန်> 5000 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်
သဘာဝ Menthol Crystals MSDS Information
(1R, 2S, 5R) - (-) - Menthol အင်္ဂလိပ်
သဘာဝ Menthol Crystals Usage And Synthesis
ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများ အဝါရောင်ကြည်လင်သောပုံဆောင်ခဲ powde မှအဖြူ
အသုံးပြုသည် analgesic (လိမ်း) antipruritic အေးဂျင့်
အသုံးပြုသည်	 (1R, 2S, 5R) - (-) - Menthol (L-Menthol) is the natural form of Menthol. L-Menthol is used as: refreshing agent, food flavor, cool and antipruritic drug, carminative drug. Menthol crystals is used for pers onal care and cosmetics.
အဓိပ္ပါယ် CHEBI: (1R, 2S, 5R) -stereochemistry ရှိပြီးသည့် p-menthan-3-ol ။ ၎င်းသည်သဘာဝတွင်အများဆုံးတွေ့ရသော enantiomer ဖြစ်သည်။
ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုယ်ရေးအချက်အလက် သွေးကြောသွင်းလမ်းကြောင်းအားဖြင့်အဆိပ်။ မျိုချမိခြင်း၊ intraperitoneal နှင့်အရေပြားအောက်လမ်းကြောင်းများကြောင့်အလယ်အလတ်အဆိပ်ဖြစ်စေသည်။ မျက်စိယားယံ။ mutation ဒေတာအစီရင်ခံခဲ့သည်။ ပြိုကွဲပျက်စီးရန်အပူပေးသောအခါ၎င်းသည်ပြင်းထန်သောမီးခိုးနှင့်ယားယံစေသောအငွေ့များကိုထုတ်လွှတ်သည်။
သန့်စင်နည်းများ CHCl3၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အီ EtOH / ရေမှ menthol ကို kristalize ။ [Barrow & Atkinson J Chem Soc 638 1939, Beilstein6III 133,6IV 150]
hot Tags:: သဘာဝ Menthol Crystals, 2216-51-5
သဘာဝ Menthol Crystals, 2216-51-5